Professional Moveable / trailer ụdị Dizel Generator Set Manufacturer and Factory Directly | Gị dị ka
Enwere ike kee igwe na-adọkpụ ụdị igwe eji adọkpụ ụgbọala, nke jenerato, nke nwere igwe eletrik atọ, igwe eletrik na-arụ ọrụ, igwe eletriki ụgbọala, ebe ana - adọkpụ ụgbọala na - adọkpụ, ebe ana - ebugharị obere mkpọtụ, ebe ana - ebugharị igwe eletriki, eletriki. ụgbọ ala injinịa, wdg.
Traction: ịmụta ibughari nko, 180 Celsius turntable, mgbanwe n'iru, hụ na nchekwa na-akwọ ụgbọala.
Braking: E ​​nwere ikuku ikuku na usoro ijiri aka iji hụ nchekwa n'oge ịkwọ ụgbọala.
1. noiserụ ọrụ mkpọtụ dị oke mkpa, ụda mkpọtụ generator 75dB (A) (1m pụọ na nkeji).
2. Nchịkọta zuru ezu nke otu dị na nhazi, obere olu, akwụkwọ akụkọ ma mara mma.
3. Multi-oyi akwa ọta impedance mismatch ụda mkpuchi mkpuchi.
4. rụọ ọrụ nke ọma mkpọtụ Mbelata ụdị ọtụtụ ọwa oriri na iyuzucha, oriri na iyuzucha ikuku ọwa, iji hụ zuru ike arụmọrụ nke unit.
5. Nnukwu impedance mejupụtara silencer.
6. Nnukwu ikike mmanụ mmanụ burner.
7. Ihe mkpuchi pụrụ iche ngwa ngwa maka mmezi dị mfe.
"Emela ọrụ" ma ọ bụ ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị yiri nke ahụ kwesịrị ịdabere na ngbanwe mmalite ma ọ bụ mabụba tupu mmezi ma ọ bụ ndozi nke jenerato setịpụrụ.
Ekwela ka ndị ọrụ na-enwetaghị ikike dị nso na injin ahụ ka a na-edozi ma ọ bụ na-edozi nrụnye generator.
Pịa bọtịnụ nkwụsị mberede na ogwe njikwa nke generator generator, na ngbanwe mmepụta generator kwesịrị ịnọ na OFF (OFF).
Dịka iwu chọrọ ọnọdụ ọrụ, mgbe ị na-abanye ebe ntinye nke igwe jenerato, a ga-eyi okpu nchekwa, ma a ga-eyi anya nchedo na ngwa nchekwa ndị ọzọ mgbe ọ dị mkpa.
Yiri uwe nchebe ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ engine n'ime ebe akara iji gbochie mmebi nke ịnụ.
Gbaa mbọ hụ na ọta niile ma ọ bụ mkpuchi dị na injin ahụ. Kpachara anya mgbe ị na-eji ndị ọrụ nhicha niile.Echekwala ihe ndozi na ihe eji etinye iko, ebe ọ bụ na iko iko nwere ike imebi.
Mgbe otu n'ime ọnọdụ ndị a mere, a na-ahapụ ka oge ịgbatị oge kwesịrị ekwesị:
(1) oge nchekwa batrị karịrị ọnwa 3, oge ịkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ elekere asatọ; (2) ihere okpomọkụ dịruru 30 Celsius c (86 ° F) ma ọ bụ ikwu iru mmiri dịruru 80%, na Nchaji oge bụ 8 awa.
(3) Ọ bụrụ na oge nchekwa batrị karịrị afọ 1, oge nkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ awa iri na abụọ.
(4) Ná ngwụsị nke eriri nkwụnye ego, lelee ma mmiri mmiri nke electrolyte zuru ezu, ma gbakwunye electrolyte ọkọlọtọ na nnukwu ike ndọda ziri ezi (1: 1.28) mgbe ọ dị mkpa.
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ batrị ahụ, buru ụzọ mepee mkpuchi nhicha ma ọ bụ okpu ikuku nke batrị ahụ, ma lelee ọkwa electrolyte, ma dozie ya na mmiri dechara mgbe ọ dị mkpa. Na mgbakwunye, iji gbochie mmechi nke batrị cell mmetọ ikuku enweghị ike a ga-ewepụta oge na iji zere odide nke ụmụ irighiri mmiri nke dị n'ime mgbidi ahụ dị elu, a ga-akwụ ụgwọ iji mepee ikuku ikuku pụrụ iche iji kwado ikuku ziri ezi nke ikuku.
Nke gara aga: 5kw ịgbado ọkụ diesel generator set
Osote: 15kva-500kva Open / Silent Nature Gas Generator Setịpụrụ
Moveable / trailer ụdị Dizel Generator
Uzo Ike 10KVA-500KVA
Voltaji 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V KWESR 220
Injin ya na Cummins, Perkins, Doosan, Wandi, Kubota, Yanmar, Isuzu, wdg.
Ihe ntụgharị Leroy somer, Stamford, Marathon, wdg.
Njikwa Deepsea, Comap, Smartgen, wdg.
Circuit emebi ABB / SCHNEIDER, wdg.
.Dị Mepee / Gbachi nkịtị
Mmanụ tank Tanka dị elu, tankị ọdụ ụgbọ mmiri, tank mmanụ ụgbọ ala kwa ụbọchị
Nhọrọ na-akwado ngwaahịa Mbugharị / Trailer Ddị Dizel Generator / Mmekọrịta Sistem na-akpaghị aka Nyefee Gbanwee / mybọchị Ibu mybọchị
Generator Tụkwasịnụ akporo
1. Njin: Ọhụrụ engine ọhụrụ.
2. Alternator: Brand ọhụrụ brushless alternator, otu amị, IP23, H mkpuchi klas.
3. Isi ụba: Nrụgide dị arọ ọwa isi etiti.
4. Igwe okpomọkụ ahụ: Na nchekwa nche.
5. Omume ọma jijiji Omume ọma jijiji dị n'etiti Injin / Alternator na etiti ntọala
6. na-emebi: 3-osisi mmepụta ntuziaka circuit emebi dị ka ọkọlọtọ, 4 okporo osisi maka nhọrọ
7. njikwa: Seadị Deepsea, Comap ma ọ bụ Smartgen, wdg.
8. Silencer: Nrụgide ọrụ ụdị ụlọ ọrụ mmechi silencer nwere ezigbo bellow, ikiaka.
9. Batrị: Varta Brand, ikike dị elu mechiri emechi batrị c / w batrị batrị.
10. Mmanụ ụgbọ: 8 awa isi mmanụ ụgbọala tank ma ọ bụ ahaziri
11. Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ & Akwụkwọ ntuziaka: Ngwaọrụ ọkọlọtọ na arụmọrụ / mmezi / akwụkwọ ntuziaka maka Generator / Engine / Alternator / control panel, wdg.